‘मुलुक बनाउने खाका बाम गठबन्धनसँग मात्रै छ’ : गंगाबहादुर तामाङ ‘बमध्वज’ – NamoBuddha Khabar
‘मुलुक बनाउने खाका बाम गठबन्धनसँग मात्रै छ’ : गंगाबहादुर तामाङ ‘बमध्वज’
सोमबार, मंसिर १८, २०७४ | १६:३८:२८ |
गंगाबहादुर तामाङ ‘बमध्वज’
बाम गठवन्धनका उमेदवार, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १, काभ्रे
० प्रतिनिधि सभाको लागि उमेदवारी हुनु भएको छ, कसरी लिनुभएको छ यसलाई ?
यो वेला भनेको उमेदवारी बन्ने वा हुने ब्यक्ति जो सुकै भएपनि आम नेपाली सवृहारा जनताको सत्तालाई संस्थागत ढंगले स्थापित गर्ने महान् अभियान हो। यो महान्अ भयिनमा जो जहाँ रहनुभएको छ, त्यही तह र तप्काबाट उत्पीडित जनताको वास्तविक मुक्ति र उनीहरुको उत्थानको लागि लड्ने वेला पनि हो निर्वाचन । त्यसैले हामी यतिवेला आम नेता कार्यर्ता र बुभचिन्तक आम जनताहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ ।
यसलाई निर्वाचनको अवसर वा माहोलको रुपमा नभईकन जनताको मुक्ति संग्रामको अन्तिम लडाईको रुपमा लिएर हामी यतिवेला आम जनताको घरदैलामा महान् अभियानको वास्तविक सन्देश पु¥याउँदै निर्र्वाचनको लागि लागिहरेका छौं । यसमा कतिपय अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नेहरुले भ्रम छरिरहेको छ, त्यसलाई चिर्दै आम रुपमा बाम गठनबन्धन र त्यसले गर्न खोजिएको अभिभारालाई कसरी टुङ्गोमा पु¥याउने र सबै जनतालाई यो अवसरमा कसरी निर्वाचनमा अग्रगामी पक्षम उभिने बातावरण तयार गर्ने भन्ने विषयम नै केन्द्रीय भएर गाउँ गाउँमा चुनावी अभियानमा लागिरहेका छौं ।
‘अहिले आम जनताले देखेको सपना र राष्ट्रको समृद्धिको अभिाभारा पनि बाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारबाट मात्रै सम्भव देखिएकोले त्यसको नीतिगत कुरालाई संस्थागत गर्न पनि आम जनताले हामीलाई रोजीरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि यो प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि हामीमाथि जनताले गरेको आशा र भरोसालाई यथार्थमा बदल्ने अभियानमा यतिखेर हामी गम्भिर भएर लागिरहेका छौं ।’
० प्रतिष्पर्धा कतिको सहज देख्नुभएको छ ?
प्रतिष्पर्धा निकै सहज छ । माओवादी–एमालेबीचको बाम गठबन्धनपछि आम मतदाता तथा जनताहरुमा उत्साहित भएको पाएका छौं । हामीले के गनैृ जरुरी छ भने ति जनताहरुको उत्साहलाई यथार्थमा बदल्नको लागि कसरी त्यसको एकता र सुदृढिकरण गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रीत छौं । एउटा यसमा देखिएको उत्साहले नै प्रतिष्पर्धालाई धेरै सहज बनाइदिएको छ । त्यससंगसंगै अहिले आम जनताले देखेको सपना र राष्ट्रको समृद्धिको अभिाभारा पनि बाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारबाट मात्रै सम्भव देखिएकोले त्यसको नीतिगत कुरालाई संस्थागत गर्न पनि आम जनताले हामीलाई रोजीरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि यो प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि हामीमाथि जनताले गरेको आशा र भरोसालाई यथार्थमा बदल्ने अभियानमा यतिखेर हामी गम्भिर भएर लागिरहेका छौं ।
० तपाईले जित्ने आधारहरु के–के छन् ?
पहिलो आधार भनेको स्थानीय तहको मत हाम्रो १७ हजारले बढी छ । त्यसपछि मतदाता संख्या थपिँदा हाम्रा बाम गठबन्धन समर्थकहरुको संख्या पनि उत्तिकै संख्यामा बढेको बवस्थामा छ ।
अर्को आधार भनेको एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि जनतामा उत्साह पैदा भएको छ । त्यसको पुष्टि हाम्रो उम्मेदवारी मनोनयनको दिनमा उर्लिएको जनसागरले गरेको छ । अर्को मुख्य आधार भनेको हामी जनताको मन र विश्वास जितेर मात्रै काम गर्छौ । कसैलाई तर्साएर, धम्क्याएर वा थर्काएर मत माग्दैनौँ । हामी शान्तिपूर्ण ढंगबाट हरेक जनताको मन जित्ने प्रयासमा हुन्छौँ र जित्न सक्छौं पनि । हाम्रो यसअघिदेखिको निरन्तर जनतासँगै समुधुर सम्बन्धका कारण पनि हाम्रो गठबन्धन र मेरो जित हुनेको मुख्य आधार हो । मेरो जीत भनेको नै बाम गठबन्धनको जीत । नेपाली सर्वहारा वर्गका जनताको जीत हो ।
० त्यसलाई आफ्नो पक्षमा सुनिश्चित गर्ने आधारहरु चाही के के छन् ?
चुनाव शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाबाटै जित्ने हो र हामीसँग भएको मतको रक्षा गरेर जित्ने हो । हामी सिंगो राष्ट्रिय हिसाबले पनि मतको रक्षा गरे मात्रै पनि जित्छौँ । त्यससंगसंगै काभ्रेको सन्दर्भमा जनताको हितमा राष्ट्रि नीित बनाएर समस्याको समाधान गर्ने र सिङ्गो राष्ट्र निर्माणको खाका बाम गठबनधनसंग मात्रै छ भन्ने कुरा पनि काभ्रेली जनताले राम्रोसंग बुझेका छन् ।
त्यसकारण पनि काभ्रेली जनताले हाम्रो गठबनधनको पक्षमा मत दिनेछन् । हामी त्यसको सुश्चिित गर्दैअ ागामि दिनमा यहाँका जनताले हामी माथि गरेको भरोसालाई पूरा गर्ने आधार र सामाथ्र्य पनि हामीसंग मात्रै छ । हामी आह्वान गदैछौं, म आहेवान गर्न चाहन्छु कि, यस अर्थमा पनि काभ्रेली जनताले हामीलाई नै रोज्नुहोस्, हामी सिङ्गो मुलुकको भाग्य र भविश्यको सुनिश्चित गर्दै समृछ राष्ट्र निर्माण गरे देखाउने छौं ।
‘हामी जनताको मन र विश्वास जितेर मात्रै काम गर्छौ । कसैलाई तर्साएर, धम्क्याएर वा थर्काएर मत माग्दैनौँ । हामी शान्तिपूर्ण ढंगबाट हरेक जनताको मन जित्ने प्रयासमा हुन्छौँ र जित्न सक्छौं पनि । हाम्रो यसअघिदेखिको निरन्तर जनतासँगै समुधुर सम्बन्धका कारण पनि हाम्रो गठबन्धन र मेरो जित हुनेको मुख्य आधार हो ।’
० राष्ट्रिय वा स्थानीय हिसाबले हेर्दा बाम गठबन्धनबीचमा एउटा आशंका छ, एकअर्कामा विश्वास गदैृन भन्ने, सबै मत बाम गठबन्धनको उमेदवारलाई नै हाल्छन् भन्ने आधार के छ ?
हामी अहिले विगतका तितामीठा अनुभवलाई सँगै लिएर निर्वाचनको मैदानमा छौँ । विगतमा दुवै पार्टीबाट भएका गल्ती र भुललाई बिर्सेर हामी नयाँ ढंगबाट चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासम्म जाने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ । मैले अघि पनि भने कि, एमालेसँग हाम्रो तालमेलले जनतामा उत्साह पैदा भएको छ । आम जनता नै उत्साहका साथ अघि बढिरहेको बेला विगतका तुषहरुलाई हेरेर एमालेले माओवादीलाई वा माओवादीले एमालेलाई धोका दिने कुनै ठाउँ छैन । किनकी हामी समृद्धिको यात्रामा छौँ, सिंगो मुलुक परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ । समग्र राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिका निम्ति एमाले–माओवादी विगतको तिक्ततालाई छाडेर अघि बढिरहेको सबैलाई थाहै छ ।
यसबीचमा विरोधीहरुले उचाल्ने र भ्रम फैलाउने जनु कुरा छ । त्यो विरोधी कित्ताको धर्म नै अरुमाथि खनिने । तर उनीहरुको छरेको भ्रम र हल्लामा अहिलेका सचेत जनता पछि लाग्छन् भन्ने छैन । हामी मुलुको समुनत विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा आम जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
० मतदाताहरुको बीचमा के एजेण्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ?
नेपाली जनताको त्याग र बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त नयाँ संविधानको कार्यान्वयन नै अहिलेको प्रमुख एजेण्डा हो । नयाँ संविधानभित्र समाविष्ट संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको अन्य जनताको अवस्था र आधारभूत परिवर्तनका विषयहरु नै अहिले जनतामाझ लिएर जाने हो ।
‘सञ्चारमाध्यम मार्फत के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने म भाषण होइन, परिणाममुखी काम गर्नेछु । बोलेको कुरा व्यावहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्छु । यसमा कोही कसैले आशंका नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ समाजवादको यात्रा तय गर्ने विषय पनि अहिले हामी जनतामाझ लिएर जाँदैछौँ । वामपन्थी एकता, नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी यात्रालाई पूरा गर्नकै लागि हो भन्ने कुरा पनि हामी जनतालाई प्रष्टसँग भन्नेछौँ । जनतामा देखिएको उत्साहकाबीचमा हामीले भन्नैपर्छ, वामपन्थीहरुबीचको एकता मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि हो । हामी मिलेर नै यो देशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिको सुनिश्चितता गर्छौ भन्ने कुरा नै अहिले जनताको माझमा लिएर जाने हो ।
० यी त सबै राष्ट्रिय एजेण्डा भए, स्थानीय स्तरका एजेण्डा चाही के छ ?
निश्चय पनि हामी स्थानीय विशेषता अनुसारको एजेण्डा लिएर जनतासँग जानैपर्छ । अहिलेको हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको जनताको सदियौँदेखिको विकासको सपनालाई पूरा गर्ने र सामान्य भन्दा सामान्य जनताको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने नै हो ।
प्रतिनिधि सभा १ नम्बरका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको सडक, विद्युत, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटनको विकास, खानेपानी, सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शिक्षा लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । म आफैँ जनताको घरदैलोमा पुगेर भन्छु कि, तपाईहरुको सदियौँदेखिको चाहना र आवश्यकता अब पूरा हुन्छ, र पूरा हुने बेला आएको छ ।
० नेताले बोल्ने हो, काम गर्ने होइन भन्ने जनताको आवाज छ, यसलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
कतिपय नेता साथीहरुले परिणाममुखी कामभन्दा भाषण बढी गरेको पनि होला । जनतामा त्यसले वितृष्णा पैदा गराएको छ । तर एउटा कुरा के हो भने सबै नेता बोल्ने मात्रै छैनन्, काम गर्ने पनि छन् । म सञ्चारमाध्यम मार्फत के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने म भाषण होइन, परिणाममुखी काम गर्नेछु । बोलेको कुरा व्यावहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्छु । यसमा कोही कसैले आशंका नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
० आम अतदाताहरुसंग तपाईको सन्देश ?
हामी आर्थिक समृद्धि र विकासको महानयात्रामा छौँ । हरेक मतदाताले समृद्धि र विकासको पक्षमा आफ्नो मत विवेकपूर्ण ढंगले दिनुपर्ने बेला आएको छ । न कि तत्कालिन पाmइृदा र गुलिायो भाषणमा होईन, तपाईको एउटा भोटमा तपाईको सिङ्गो भविश्वत जोडेकै छ, त्यभन्दा गम्भिर कुरा तपाईको एक भोटमा तपाईको भावी पुस्ताको पनि भविश्य र भाग्या जोडेको छ । त्यसैले यस्तो अमुल्य भोट कसैको प्रधलोभनमा र तत्कालिन फाईको रुपमा नलिई समृद्ध मुलुक बनाउने महान अभिभानमा साथ दिन आम मतदाता र काभ्रेली जनतासमक्ष लामबद्ध भई वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई विजयी गराइदिनुहुन म आम मतदाताहरुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
धुलिखेल नगरपालिकाद्वारा ५० बेडको सुविधासम्पन्न आईसोलेसन कक्ष सञ्चालन
काभ्रे जिल्ला प्रशासनद्वारा पुनः निशेधाज्ञा जारी
चौंरीदेउरालीमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन,पालिकाद्वारा निशेधाज्ञा जारी
प्रेस स्वतन्त्रता दिवस : काभ्रेका सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सामाग्री बितरण
कोरोना प्रभाव : १३ औं राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम स्थगित
नमोबुद्धमा अक्सिजनसहितको २५ शैयाको आइसोलेसन स्थापना
निषेधाज्ञा नटेरे सडकमै सजाय हुने,२ सय २८ ठाउँमा ट्राफिक चेकिङ